राईले कार्यभार सम्हाले, किन दिँए अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख जोशीले राजीनामा ? Nepalpatra राईले कार्यभार सम्हाले, किन दिँए अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख जोशीले राजीनामा ?
राईले कार्यभार सम्हाले, किन दिँए अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख जोशीले राजीनामा ?
अख्तियारमा ओली र प्रचण्डनिकटको टसल
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले कार्यभार सम्हालेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवासमा सपथ ग्रहण गरेलगत्तै नक्साल टंगालस्थित कार्यालयमा आएर उनले कार्यभार सम्हालेका हुन् ।
राईसँगै आयुक्त किशोर कुमार सिलवाल र जय बहादुर चन्दले पनि कार्यभार सम्हालेका छन् । अख्तियारका कर्मचारीहरुले राईसहितका अन्य आयुक्तहरुलाई स्वागत गरेका थिए । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश पाएका जोशी अख्तियारमा समेत सचिव भइसकेका थिए । ‘एकेडेमिक’ छवि बनाएका उनी यो अवधिमा विवादमा परेनन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कोटामा सिफारिस भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस नगरेको बुझिएको छ ।
साथै अख्तियारमा ओली र प्रचण्डनिकटको टसल देखिएर जोशी राजीनामा दिएको पनि प्रष्ट देखिन्छ । अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकालमा गैरसंवैधानिक एवं कानून विपरीत क्रियाकलाप हुँदा मौन बसेको आरोप भने उनीमाथि थियो ।
उनीले राजीनामा दिएसँगै अख्तियारमा अब १ पद रिक्त भएको छ भने जोशीको बिदाई कार्यक्रम आजै हुन लागिरहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता एव‌ंं सूचना अधिकारी वेदप्रसाद भण्डारीले नेपालपत्रलाई जानकारी दिएका छन् ।
तर आयुक्त सावित्री थापा गुरुङले पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेको भन्ने जस्ता समाचार बाहिर आएतापनि उनले भने राजीनामा नदिने संकेत देखिएको छ । नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा उनी पनि उनलाई स्वागत गर्न र नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त राईको कार्यकक्षमा उपस्थित भएकी थिइन् ।
#Dr. Ganesh Raj Joshi
#Prem Kumar Rai
#कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त